MGBE ỌHỤRỤ Arts ARO ọzọ emekọ NTỤRỤNDỤ AKU NA UBA
Chadwick Boseman: kpakpando ojii ojii e liri na Belton, South Carolina
E liri Chadwick Boseman n’ebe a na-eli ozu Welfare Baptist Church na Belton, South Carolina, nanị kilomita ole na ole site n’obodo ya bụ́ Anderson. Nke a gosipụtara site na akwụkwọ ọnwụ nke E! Akụkọ.…
Ndepụta nke ihe nkiri ọhụrụ na usoro iji lelee na Ọktọba 2020
Ndepụta nke ihe nkiri ọhụrụ na usoro iji lelee na Ọktoba 2020 Ọnọdụ okpomọkụ agbadawo n'ụzọ dị egwu n'oge na-adịbeghị anya mana ọ dị mma n'ihi na ị ga-enwe ike itinye onwe gị n'ime blanket mgbe ị na-elele mmemme ọhụrụ Netflix!
"Africa Mia": n'usoro nke ndị Malian ndị a mepụtara ụda Afro-Cuban
"Rendez-Vous chez Fatimata": kpara ike dị egwu na 1960 nke amụrụ site na njem ndị egwu Malian na Havana. Na ihe nkiri "Africa Mia", nke a ga ewepụta na Septemba 16, Richard Minier na-akọ akụkọ ha. 1964. Ọ bụ n’echi ya ...
Emegbe ikpe Johnny Depp megide Amber Heard!
Johnny Depp ịgba akwụkwọ ikpe megide Amber Heard na Virginia agaghị eme na Jenụwarị. Onye ọka ikpe na-ahụ maka ikpe ahụ kwupụtara na a ga-eme ikpe ahụ site na Mee 3, 2021. Onye omee nke Pirates nke Caribbean nwere…
Central Africa: agbụrụ maka ndị na-ege ntị ... na mmetụta
Ndi otu Chadvis, Equatorial Guinea, Central African Republic groups Ndi otu ọdịyo ọdịyo nke Cameroon na-egwuri egwu n'akụkụ oke iji gbasaa ọnụnọ ha na mpaghara mpaghara. Jean-Pierre Amougou Belinga nwere ikuku na ụgbọ mmiri ya na Bangui. Dị ka…
Ihunanya Nwa agbogho - Video
LA SAMBA AFRICAINE TV bụ ọwa Africa kachasị mma na ntụrụndụ ọhụụ na ihe nkiri Nigeria ọhụrụ, Ivorian na Cameroon na ọkachasị echefula ịpị njikọ dị n'okpuru:…
Jide Paul Rusesabagina, dike nke ihe nkiri "Hotel Rwanda" - Video
Ndị uwe ojii Rwandan jidere Paul Rusesabagina, onye akụkọ ya kpalitere ihe nkiri a "Hotel Rwanda". Onye katọrọ onye isi ala Paul Kagame ogologo oge, a na-ebo ya ebubo nke iyi ọha egwu. Idenye aha na ọwa anyị na ...
Ọnwụ Chadwick Boseman, omee nke "Black akukonta" - Video
Chadwick Aaron Boseman bụ onye omee America, amụrụ na Nọvemba 29, 1976 na Anderson (South Carolina) wee nwụọ n’abalị iri abụọ na asatọ n’afọ 28 na Los Angeles (California). Ọ nwụrụ n'ọrịa cancer eriri afọ mgbe ọ gbalịsịrị afọ anọ.…
Onye American Chadwick Boseman, kpakpando nke ihe ịga nke ọma ụwa nke Marvel studios "Black Panther", nwere…
Onye American Chadwick Boseman, kpakpando nke ihe ịga nke ọma mbara ụwa nke Marvel studios "Black akukonta", nwụrụ na 43, mgbe agha nke kansa merụrụ afọ anọ na nzuzo, kwuru na Friday onye ọrụ ya. "Kpọọ dị ka eze ...
Esemokwu gburugburu mpaghara ndị na-ege ntị na Senegal!
N'okpuru nrụgide sitere na mkpakọrịta okpukpe, enelọ Ọrụ Na-ahụ Maka Iwu Na-ahụ Maka Ọha na Senegal na Senegal gbanwere, na mbido August, usoro "Infidèles" E buliri ọtụtụ olu iji katọọ omume mmachi. "Ndị ekweghị ekwe", oge 1, ...
1 2 3 ... 5 esote
Echiche ndị ga-agbanwe Africa: ego dijitalụ, ikike nke ...
Na Mbụ Osote 1 nke 57